काठमाडौंको सडक : पैदलयात्रुको अधिकार सुरक्षित गरौं | Suvadin !
डाक्टर उत्तरकुमार रेग्मी
पर्यटनमैत्री भौतिक पूर्वाधार
सहरी पूर्वाधार विकास विभाग
सहर क्षेत्रमा १५ मिनेट हिँड्नु राम्रो हुन्छ। काठमाडौंको कुरा गर्दा कुपण्डोलमा गाडी राखेर न्युरोड पुग्न सक्छौँ। १० मिनेट हिँड्नु हाम्रो स्वास्थ्यकै हितमा छ। त्यसैले पैदलयात्रुका लागि सडक बनाइएमा र नेपालको सडक व्यवस्थित हुन्छ। पैदलयात्रुमैत्री हुन्छ र पर्यावरणमैत्री पनि हुन्छ। साथै काठमाडौं उपत्यका संसारकै रमणीय पर्यटकीय स्थलको रुपमा विकास गर्न सकिन्छ।
पैलदलमार्गमा राखिएको ह्युम पाइपको अवराेध छिचोल्दै यात्रु।
संयुक्त राज्य अमेरिका, विश्वको अर्थतन्त्रको शक्तिशाली मुलुक हो। हामीलाई त्यहाँका मुख्य सडक कस्ता होलान्? त्यहाँको भौतिक पूर्वाधार कस्तो होला भन्ने लाग्छ। परिवर्तित सामाजिक, राजनीतिक एवम् आर्थिक सन्दर्भमा मुलुकले भौतिक पूर्वाधारको विकासमा पनि विशेष ध्यान पुर्याउनुपर्छ। जनसंख्या बृद्धिबाट उत्पन्न परिस्थितिलाई पर्यटनमैत्री भौतिक पूर्वाधारको विकासले मात्रै थेग्न सक्छ।
काठमाडौं महानगरपालिकाभित्रको सडकको स्थिति डामाडोल छ। लगभग दुर्इ हजारदेखि २५ सय किलोमिटर सडक विस्तार भएको छ। पहिले जसरी बनेको थियो, त्योभन्दा एक सुता पनि परिवर्तन भएको छैन। नयाँ सडक एउटै बनेको छैन। जग्गा किन्ने र घर बनाउनेले आफैं सडक बनाएका छन्।
नेपालका अधिकांश सडक निजी लालपूर्जाभित्रैका छन्। अहिले पनि दैनिक ५० देखि १ सय मिटर सडक निर्माण भइरहेको छ। सरकारले ल्याएको सडक निर्माण कार्यक्रमअन्तर्गत ८ मिटरलाई ११, ११ लाई १६ बनाउने कार्य भइरहेको छ। तर, नयाँ सडकको विस्तार कतै भएको छैन।
धरहरा बनाउने विषयमा सरकारले गृहकार्य गरिरहेको छ। धरहरा निर्माण भएपछि त्यहाँ दुर्इ सय वटा सवारीसाधन पार्किङ गर्नुपर्ने हुन्छ। पुरानो बसपार्कमा महानगरले कमर्सियल कम्प्लेक्स निर्माण गर्दैछ। क्रमशः सडकमा गाडीको चाप बढ्दै जान्छ।
नीतिगत व्यवस्था गरेर गाडीको बढेको चापलाई व्यवस्थापन गर्नुपर्छ। आनुपातिक व्यवस्थापनले मात्रै काठमाडौं सहरको असली सुन्दर रहिरहन सक्छ। कुन सवारीसाधन कुन रुटमा प्रवेश गर्न पाउने भन्ने निर्णय लिइए राज्यसंयन्त्रलाई ट्राफिक व्यवस्थापनमा सजिलो हुन्छ।
पैदलयात्रुका लागि काठमाडौंका सडक उपयुक्त छैनन्। त्यसैले पैदलयात्रुका लागि पनि सडक लेनको व्यवस्था गर्नुपर्छ। मोटरेबल ट्रयाकलाई एक लेन घटाएर पैदलयात्रुका लागि सडक बनाउनुपर्छ। हिँड्न लायक बाटो बनाउनुपर्छ।
कुनै दिन लाजिम्पाट सडक, तीनकुने–माइतीघर सडकखण्डमा पैदलयात्रुका लागि छुट्टै ट्रयाक बन्ने छ। किनभने काठमाडौं सहरलाई गाडीमैत्रीभन्दा पैदलयात्रु मैत्री सहरको रुपमा विकास गर्न अनिवार्य छ। युरोपका अधिकांश मुलुकका सडकमा गाडीभन्दा पैदलयात्रु र साइकल चल्छन्।
सडक निर्माणको ढाँचा पनि त्यही अनुरुप हुन्छ, पहिले पैदलयात्रु र साइकलयात्रु अनिमात्रै ठूला सवारीसाधन। तर, हाम्रो सडकको निर्माण र विस्तार गाडी व्यवसायीलाई धनी बनाउने ध्येयले मात्रै बनेका छन्।
पछिल्लो समय सवारीसाधनको बिक्री ५० प्रतिशतले बृद्धिले पनि सडकको स्थितिलाई पुष्टि गर्छ। पैदलयात्रुले पानी किन्छन्, केही खानेकुरा खाँदै हिँड्छन्। पैदलयात्राले मानिसलाई र सडकलाई जीवन्त राख्छन्। संसारका महत्वपूर्ण सहरका सडकमा गाडी आवतजावत निषेध छ।
न्यूयोर्कको टाइम्स स्क्वायरमा सवारीसाधन लान निषेध छ। त्यसैले त त्यहाँको सुन्दरतालाई धुँवा र धुलोले नष्ट गर्न सक्दैन। सहर क्षेत्रमा १५ मिनेट हिँड्नु राम्रो हुन्छ। काठमाडौंको कुरा गर्दा कुपण्डोलमा गाडी राखेर न्युरोड पुग्न सक्छौँ। १० मिनेट हिँड्नु हाम्रो स्वास्थ्यकै हितमा छ।
त्यसैले पैदलयात्रुका लागि सडक बनाइएमा र नेपालको सडक व्यवस्थित हुन्छ। पैदलयात्रुमैत्री हुन्छ र पर्यावरणमैत्री पनि हुन्छ। साथै काठमाडौं उपत्यका संसारकै रमणीय पर्यटकीय स्थलको रुपमा विकास गर्न सकिन्छ।
(रेग्मीले काठमाडौं महानगरपालिकाको सहरी पूर्वाधार विकास विभागका प्रमुख हुन्)